Hamann က S1, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန် K သည်.
အမျိုးသားများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေထက်လှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွသောကပိုစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံလိင်မှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့တူညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုသောအခါ amygdala နှင့် hypothalamus ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများတွင် activated ဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီအမြိုးသမီးမြား သာ. ကြီးမြတ် arousal အစီရင်ခံတင်ပြလျှင်ပင်စစ်မှန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်ကွဲပြားမှုအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝမှတိကျတဲ့ခဲ့ကြသည်, limbic ဒေသများသို့အဓိကအားကန့်သတ်, လက်ျာ amygdala ထက်လက်ဝဲ amygdala အတွက်ပိုမိုကြီးမားကြ၏။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြိုးကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် ventral striatal ဒေသများအပါအဝင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဒေသများဖြတ်ပြီးအလားတူ activation ပုံစံများ, ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် amygdala လိင်အစာစားချင်စိတ်မှတုန့်ပြန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဇီဝအဓိကလှုံ့ဆော်မှု mediates ကြောင်းညွှန်ပြ; လူ့ amygdala ကိုလည်းကြိုတင်တိရိစ္ဆာန်တွေ့ရှိချက် paralleling, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများ၏သတင်းများအရ သာ. ကြီးမြတ်အခန်းကဏ္ဍဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။
အမှား: နှုန်းကန့်သတ် (အမှားကုဒ်: 88) ကျော်လွန်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် မှားယွင်းနေသည်ကုဒ်များ & တုံ့ပြန်ချက်.